Faka i-iOS 8.3 kwisixhobo sakho ngaphandle kwe-USA | IPhone iindaba
Namhlanje kwi-iPhone ye-Actualidad sikubonisa ukuba ungayifaka njani i-beta kawonkewonke ye-iOS 8.3 kwi-iPhone yakho ngaphandle kokuba uvela eUnited States., kwaye isuka kwi-iPhone efanayo. Inkqubo ilula nangona uzakufuna ifayile yeprofayile endiza kuyipapasha kwisithuba, i-iOS 8.3 izisa nokuphuculwa kokusebenza okufutshane ngokubanzi, ukongeza kwibhetri kunye nokuchukumisa okuncinci kwikhibhodi.
Njengoko besixelile ngaphambili, iApple iyakwenza ukuba i-beta yayo i-iOS 8.3 ibe sesidlangalaleni kuye nakowuphi na umsebenzisi owayekhe wabhalisela inkqubo ye-beta kawonke-wonke, nangona kunjalo, singadana ukwazi ukuba ngabasebenzisi baseMelika kuphela abangayonwabela inkqubo. Kodwa ngoku, ukuba silandela la manyathelo alula sinokuphanda nge-iOS 8.3 ngokusebenzisa izixhobo zethu naphi na emhlabeni.
Olu lolunye lwezinto eziphuculweyo ezibandakanya i-iOS 8.3
Ukuphuculwa kwesithuba sebhodi yezitshixo.
Ukuphuculwa kokusebenza kwebhetri.
Okokuqala, qiniseka ngaphambi kokuyifaka ukwenza ikopi yogcino kwisixhobo sakho ukunqanda ububi obukhulu kwaye siya kuqinisekisa ukuba i-iPhone yethu ihlawulisa ngaphezu kwe-50% yebhetri. Ukulandela, siya kukhuphela ifayile equlathe iprofayile ye-iPhone de OKU link (ebaluleke kakhulu ukuba siyikhuphele kwi-iPhone esiceba ukuyivuselela) siza kucofa ukuze siyamkele kwaye siyayifaka. Nje ukuba uyifakile iya kusicela ukuba siqale inkqubo kwakhona, samkela kwakhona.
Nje ukuba sifakelwe kuya kufuneka siye kuphela ku "Useto> Ngokubanzi> Uhlaziyo lweSoftware" kunye nohlaziyo lwe-iOS 8.3 Beta 1 luza kuvela ngokungathi luhlaziyo oluqhelekileyo. Siyakhumbula ukuba le nguqulo intsha inobunzima be-1,3 Gb yememori, qiniseka ukuba unendawo eyaneleyo kwimemori ye-iPhone yakho. Nje ukuba sifakelwe sinokuhlaziya nge-OTA kwiinguqulelo ze-beta ezilandelayo ze-iOS 8.3.
Ndiyathemba ukuba isifundo sikuncedile kwaye ungathandabuzi ukushiya imibuzo yakho kwizimvo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izifundo kunye neencwadana » Faka i-iOS 8.3 kwisixhobo sakho ngaphandle kwe-USA
Izimvo ezi-68, shiya ezakho
Iposti entle kakhulu. Kuthotywa umthwalo ngoku. Ndine-iPhone 5c kwaye ndinokuthi ngohlobo lwe-8.2 ifowuni isebenze ngokumangalisayo, ukusebenza kwebhetri kulungiselelwe ukuze ifike kwiiyure ezili-14 ngokusetyenziswa kwesiqhelo, ngaphambi kokuba ndiyiphinde ndiyiphindaphinde amaxesha ama-2. Siza kubona ukuba i-8.3 ihamba njani. Enkosi!
Kukho iibugs ezinokubangela ukuba i-iPhone isebenze kakubi ukuba ihlaziye eyam kwaye uyivavanye
Kwaye kwimeko yokungasebenzi kakuhle njengoko ndibuyela kuhlobo lwangaphambili
UAllan Coronel Altamirano sitsho
Kwaye kuyacetyiswa ukuba sele bezamile okanye ngaba bakwimvavanyo zokuqala? Ndiyabulisa!
Phendula u-Allan Coronel Altamirano
UDavid Perales sitsho
Ifaka i-beta1 kodwa ayikuvumeli ukuba uhlaziye nge-Ota elandelayo, kufuneka ukhuphele i-beta3 ngokwahlukeneyo.
Ngaphandle kwalonto, ezi betas azinasiphoso, ubuncinci, kwezi ntsuku zimbini bendikunye ne-beta3
Phendula kuDavid Perales
I-beta kawonke-wonke yi-beta ehambelana nomphuhlisi we-beta 1
Marisi tole sitsho
Ukubuyela kuhlobo lwakutshanje olusemthethweni ngokulula ukhuphele uguqulelo lwamva nje, nje ukuba ikhutshiwe kwi-iTunes, cinezela kwaye ubambe iqhosha lokushiya kwiifestile kwaye ngaphandle kokukhulula ukubuyisela kwi-media, iwindow iya kuvela apho kufuneka ukhethe ifayile ye-ipsw osele unayo Ukhutshelwe kwaye ngoku Kuhleli kuphela ukulinda inkqubo igqibe
Phendula Marisi Tole
Buza, xa ndifaka i-beta, i-App ebizwa ngokuba yingxelo ifakiwe.
Ke unokuxelela iApple malunga neebugs ezinokwenzeka. Yiyo loo nto ke esidlangalaleni
Andikhupheli ifayile yeprofayile
xa ndinika ikhonkco kwi-iphone 6 yam, ayizukundivumela ndiyikhuphele !! Ndifuna ukwazi ukuba kutheni?
Sele isonjululwe !!!! Ndisebenzisa esinye isikhangeli !!
Ndicinga ukuba kufuneka usitshintshe isihloko se-psot ... loo nkangeleko yeyokuba nabani na ongafakwanga kwinkqubo ye-beta angayifaka, ayinanto yakwenza nokuba use-USA okanye eBrazil ... i-imeyile evela kwi-apile kunye ne-beta ye-iOS okoko yabhaliswa kwenye ye-yosemite, yonke into yenziwa eSpain ...
Ukuba ufake i-beta kawonke-wonke ye-iOS 8.3 eSpain, iya kuba yinkcukacha owabelana nathi ngayo
UManuel Nolasco Acosta sitsho
Ikhonkco lophukile 😰😢
Phendula uManuel Nolasco Acosta
Edgar vega sitsho
Miguel, uyayazi indlela yokukhuphela i-firmware ye-iOS 8.3 beta 3? Ngaphandle kokuba ube ngumphuhlisi? Ngaba eli nqaku liluncedo ekukhupheleni le firmware? Ukubulisa kwangaphambili ePeru!
Phendula uEdgar Vega
I-beta 8.3 kawonke-wonke iBeta 1 kunye ne-iOS 8.3 iBeta 3 zinokwakhiwa ngokufanayo, ke zikwayifirmware efanayo. Ke oku kuyakwenza
Ndingavula nje ikhonkco nge-safari
Kodwa ndifumana i-beta 1: /
Edgar olivera sitsho
Ndiyenzile ngoku ngoku kwaye yonke into ihamba kakuhle akukho siphoso.
Phendula uEdgar Olivera
Ikhonkco lokukhuphela alikho
UJordi Botey Gomez sitsho
Ngaba umntu othile angandidlulisa ikhonkco?
Phendula Jordi Botey Gomez
Ndithetha, umzekelo, xa ufuna ukukhuphela i-firmware ye-iOS 8.3 beta 3 .. Ikhokelela kwikhonkco ukuze ube ngumphuhlisi kwaye emva koko unokukhuphela i-firmware .. Kwaye okwangoku
Akukho sidingo sokubhalisa njengomphuhlisi kulo naliphi na ilizwe ngaphandle kwe-US, ngaba le profayile iluncedo ekukhupheleni i-firmware ngaphandle kokungena ngemvume kumqambi? Ukubulisa
IOS 8.3 yenziwa esidlangalaleni (Oko kukuthi, kuye wonke umntu bane-UDID okanye hayi) i-beta 3, elingana ne-beta 1 kawonkewonke, le ilapha. Ke ngoko i-iOS 8.3 i-Beta 3 kunye ne-iOS 8.3 yoLuntu ye-Beta 1 ngokuchanekileyo zi-firmware efanayo. Ke unokufaka ngaphandle konjiniyela okanye ubunzima ngakumbi kunesithuba.
Kwaye ngubani othe le beta yoluntu yeyaseMelika kuphela? Ndiyifumene ngqo kwi-Apple, ene-ID yaseSpain. Jonga imithombo yakho yolwazi ngaphambi kokuthumela izinto ezingeyonyani. Yiza, wenze umsebenzi wakho kakuhle.
Bayayitsho kwiReddit nakwenye iforum, eyona inkulu ethetha ngeSpanish, apho amakhulu abasebenzisi baye balixabisa igalelo.
Kwaye ndiyakubongoza, ukuba uyazi ukufaka iPUBLIC BETA 1 ye-iOS 8.3 ngaphandle konjiniyela, ukusuka kwi-iPhone ngokwayo, ngaphandle kokuvela e-US (eyonikezelwa kule post), i-United Kingdom okanye i-Australia, yabelana nathi. Ngaphandle koko ndiya kunyanzelwa ukuba ndihlolisise imiyalezo, endingayithandiyo kwaye ndingaze ndiyenze, kodwa izithuba ezithile ezenzelwe ukufundisa zifuna izimvo eziyinyani ukuze ndingabhidanisi abasebenzi.
Ngendlela efanayo, iimpikiswano zakho ziyaphikisana nezo zabanye abasebenzisi abanombulelo.
Jonga, Miguel Hernández, ukufaka i-beta kawonke-wonke ye-iOS 8.3 ngaphandle kokuba ngumphuhlisi kwaye ungabikho e-United States, kufuneka kuqala ubhalise kwinkqubo ye-beta kawonke-wonke ye-OS X Yosemite kwaye wenze igalelo ngesicelo "seNgxelo". Ekupheleni kosuku, ezi ntlobo zeebhetas zezokuba, ukwenza igalelo nokunceda ukupholisha imiphetho yokugqibela.
Kwelinye icala, ukuba ufuna ukubala imiyalezo yam, qhubeka. Kodwa ndihlala ndithetha into enye. Wenza umsebenzi ombi. Ke bathi phaya… Umsebenzi omkhulu wophando. Kwaye, kancinci kancinci, iphepha ebelingalunganga liguquka libe lelithi xa ufunda iindaba into yokuqala oyenzayo uyibeke "yedwa" ngenxa yokungathembeki kwamanqaku ayo.
Emva kwento entle onokuthi uyenze kukucela uxolo kubafundi bakho.
Kodwa kuyacaca ukuba ucinga ukuba kungcono kakhulu ukusongela ukucinezelwa. Kakuhle kakhulu. Qhubeka. Kulula kakhulu.
Ndixolele ngokungenelela kwingxoxo yakho, Migueles, kodwa ukuthi mna, ngaphandle kokuba ndibhalisiwe kwi-beta ka-Yosemite kwaye ndinike ingxelo (kunye nengxelo kwi-beta ye-iOS 8 nangona ibingeyiyo eyasesidlangalaleni) Andikhange ndifumane meyile malunga ne-beta kawonke-wonke ye-iOS 8.3, kwaye eSpain nguwe kuphela umntu uMiguel endikhe ndambona esithi ukwazile ukukwenza, ke ndiyabulela ugxa wam uMiguel Hernández ngegalelo lakhe, kuba nangona ndikwazile ukuyifaka Ngeendlela zakho, ayingabo bonke abafundi abanako (ukuza kuthi ga ngoku ngenxa yeli nqaku). Imibuliso kwaye nceda, uphawule kuphela kumathandabuzo, kwizimvo ezifanelekileyo okanye enkosi kangangoko kunokwenzeka (enceda kakhulu). 😀
Ndithathe isigqibo sokungaphenduli ngenxa yempendulo engacacanga. Nguye kuphela umntu eSpain ngaphandle kweakhawunti yonjiniyela owaziwayo nge-beta kawonke-wonke ye-iOS 8.3 (hayi ngoku, enkosi kwisifundo sele zininzi ezinye).
Kodwa siyakwamkela ukugxeka okwakhayo kunye nokuhlonipha ukugxeka okwonakalisayo, kuba ngaphandle kwephepha elinolwazi siliphepha lokuzonwabisa, kwaye kukho abantu abazonwabisa ngoluhlobo kwaye lilungelo labo elipheleleyo.
Ndiyathemba kwaye ndinqwenela ukuba kungabikho namnye umntu ongayeka ukusifunda ngenxa yezizathu ezinje kwaye ndiyakumema ukuba ube naphina apho ubhala khona undilumkise ukuba ndikhe ndanika ulwazi olungeyonyani okanye olungathembekanga, ngakumbi xa uninzi lwegalelo lam lukhokelwe ukuya eluvalelweni okanye kwizifundo, kuba ndingavuya ukulungisa imigca emininzi njengoko kufanelekile ukufezekisa ukuchaneka okukhulu emsebenzini wam.
Ndiyabulisa kuni nobabini nakusasa.
URaul cordoba sitsho
Imigue, umbuzo, emva kokwenza konke oku, xa kukhutshwa iOS 8.3, ngaba iya kuhlaziywa nge-OTA? Enkosi ngokusoloko usazisa. Ndiyathemba ukuba ungaphendula umbuzo wam.
Phendula kuRaul Cordoba
Ngaba iyasebenza kwi-ipad air 2 ???
Ndinayo kwi-iPad Air 2 yam ewe ewe !!
Hee mfondini, ihlala ku "hlaziyo olufunekayo ..." awuyazi into endinokuyenza? (Ndiyifakile, yaqala kwakhona, kodwa ngaphambi kokuyihlaziya, iyaphuma)
Ukufakela oku, xa kugqitywa ukuphela kuka-8.3, ngaba kuya kuvela ngokufanayo kuhlaziyo?
Okwangoku yonke into ihamba kakuhle, ubumdaka obufanayo ne-iOS 8.2, siza kubona ukusebenza kwebhetri kwaye ndiza kukuxelela ..
IKarmen QC sitsho
Luluphi olu phuculo luhlaziyo lunalo? Ngaba iluncedo kwi4S?
Phendula Karmen QC
Ukuba iyasebenza kwaye ngokucacileyo iyakhawuleza kancinci kune-8.2
UPedro Javier Cisternas Jara sitsho
Hayi kodwa yi-beta. Kungcono ukulinda.
Phendula kuPedro Javier Cisternas Jara
Ngaba omnye umntu ubuza iphasiwedi xa ucinezela FAKA iprofayile ???
INDLELA YOKUBONISA UKUHLEKA…. sisitshixo sokutshixa sefowuni yakho! Ukuba awunayo, sisitshixo kwiisetingi / kwi-ID yesazisi nakwicandelo lekhowudi ... kuphela uyazi wena okanye indlela yokukunceda ngomba! Nangona kunjalo manditsho ukuba xa ufaka iprofayile… iyakusebenza! Akhongxaki!
Ngaphandle kweSafari ndingayivula njengoko ndisenza?
Undixelela uhlaziyo ndicele ukuba kuthetha ntoni oko
Umntu ohleliyo sitsho
Ndiyenzile kwaye ngoku ayizukundivumela ukuba ndisebenzise i-spotify kwakhona !!! 😣
Emva koko ndingayithobisa ingxelo? UWhatsapp usebenza ngokugqibeleleyo?
Ndiyifakile kwaye konke kubulelwe, imibuliso evela eMexico
Kufakwe kwi-iphone 5s, yonke into ngokuchanekileyo, ilinde ukubona ukusebenza kwebhetri.
URaul alberto sitsho
Emva kokwenza konke oku, xa kukhutshwa iOS 8.3, ngaba iya kuhlaziywa nge-OTA?
Phendula uRaul Alberto
رينزو بونيفاسيو sitsho
nu unokuba: '(
Phendula ku رينزو بونيفاسيو
UMarcelo Carrera obambe umfanekiso sitsho
Kulabo basebenzisa ii-4s, i-8.2 ingcono, kungcono ukuba ulinde ukuba kukho izinto eziphuculweyo ... Kuba awukwazi ukwehlisa umgangatho, okokugqibela nge-iOS 8.2 isebenza ngcono kakhulu kune-8.1
Phendula uMarcelo Carrera
Intombi yam yenza i-8.3 ngcono kune-8.2 kwi-4S
emva kokuphefumla i-betas, xa i-iOS 8.3 esemthethweni iphuma;
Ngaba ndiya kuba nakho ukuhlaziya nge-OTA?
Enkosi ngokuphendula kwaye ngendlela, mva nje ukuba uqhubeka ubeka inqaku eliluncedo njengalo malunga nokufaka «imisebenzi» uya kuza kweli phepha kuphela. INDLELA YOKUBONISA UKUHLEKA.
Ukufaka i6plus yam, ndiyathemba ukuba yonke into ihamba kakuhle.
Ukuvavanywa kwimini encinci ye-iPad kwaye isebenza ngokugqibeleleyo, ENKOSI
Zintle !! Olunye uhlaziyo olulungiselele ibhetri kunye nokusebenza. Ubushushu obukhulu kunye neeyure ezili-16 zobomi bebhetri. Ukuza kuthi ga ngoku akukho bug!
UYesu Rg sitsho
Molo, ndine-4s, kwaye ngelishwa ndiye ndasokola kwi-8 ye-wifi engasebenzi. Kukho abantu abaye balungiswa nge-ios 8.2 kodwa ayisiyonto yam leyo.
Le nguqulo iyayilungisa? Ngaba inokukhutshelwa kuphela nge-OTA? Kuba andikwazi ...
Phendula kuYesu Rg
Andinalwazi ngengxaki nge-wifi, kwaye ndine-4s ..
INDLELA YOKUBONISA UKUHLEKA!! Ndiyakucinga ukuba ubandezeleka uzama ukukhuphela kodwa ukuba akukho wifi .. njani? Akukho ngxaki canijo, (ndiyathemba ukuba bayandivumela ukuba ndishiye ikhonkco kunye ne .ipsw)
Khetha nje i-iPhone 4S nakwi-iTunes ngokucinezela alt + cofa ekubuyiseleni (kwi-pc) nakwi-Mac Option key + cofa ekubuyiseleni, khetha ifayile ekhutshelweyo kwaye "ukubuyisela" kuya kuqala. Kwaye khumbula ukuba ngale ndlela uza kwenza ufakelo olucocekileyo ... ukhuphelo lwento yonke kwi-iCloud ukuze xa yonke into ifakiwe ... uyibuyisele kwaye ugcine yonke into njengoko yayinjalo kodwa nge-iOS 8.3 Beta ...
Ukubulisa, nayo nayiphi na into onokuyinceda ... ngovuyo!
Enkosi kakhulu Tyebile, ndiyinxibile ngoku.
Kucacisiwe kakuhle 😉
Akukho nto, iyafana 🙁
Inye into, ndine-pc kwaye kufuneka ucofe i-SHIFT kwaye ucofe iqhosha lokubuyisela, hayi i-ALT njengoko ubucacisile
I-BETA 2 ilapha
UMateo Moreno sitsho
Ndifumana ios 8.3 beta 2, unayo into entsha?
Phendula uMateo Moreno
Ukuba ndicima iprofayile efakwe kwi-iPhone yam, ngaba ndiza kubuyela kwi-iOS 8.2 okanye ngaba iya kuphazamiseka ifowuni?
Ayisebenzi kum, ndifumana "ukukhuphela" kwaye ayigqibi ukukhuphela. Andazi ukuba ndingenza njani okanye ndazi ukuba sele ndiyifakile.
ukubuyela kwi-iOS 8.2 kunye nokususa iprofayile efakwe kule beta .. landela ibhaluni yohlaziyo nangona kungekho nto inokuhlaziya .. kwaye akukho ndlela yakuyisusa
Ndine-4s ye-iPhone kwaye ithi isoftware ihlaziywa nge-IOS 7.1.2 kwaye ayizukundivumela ukuba ndiyihlaziye kwaye ndifake oko kuza kwikhonkco, ndingenza ntoni? Kutheni ndingakwazi ukuhlaziya? 😭
Molo, ukhuphele ikhonkco, ndenzile amanyathelo kodwa xa ndihlaziya kubonakala ngathi ndine-ios 8.3 ... Kamva kwiprofayili ndibona iprofayili ye-beta, ingaba ilungile ngendlela ekufuneka ijongeka ngayo? Uxolo kodwa ndiyintsha kulento
I-Toca Kitchen 2 ihlaziyiwe kwaye ivumela ukuba sipheke ngezithako ezingaphezulu